News app I-Podcast - Umagazini Design
I-Podcast Izindaba isicelo isicelo semininingwane audio. Iphefumulelwe ukwakhiwa okuyisicaba kwe-apula ye-iOS ngemifanekiso ukubonisa amabhloksi wolwazi. Ngokungabonakali ingemuva linombala oluhlaza okwesibhakabhaka njengo-mission yokwenza amabhloksi avelele. Kunezinto ezimbalwa kakhulu ezibonakalayo, inhloso, ukwenza uhlelo lokusebenza lube lula ukusebenzisa ngaphandle kokuthikameza umsebenzisi noma lulahlekelwe.
Igama lephrojekthi : News app, Igama labaklami : Raphael Batista, Igama leklayenti : News Podcast.
Ubuchwepheshe beselula, izinhlelo zokusebenza nokwakhiwa kwesoftware
I-Podcast Raphael Batista News app